म्याग्दीमा कांग्रेस–माओवादी विच तालमेल भए के हुन्छ ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्थानिय समाचार म्याग्दी समाचार म्याग्दीमा कांग्रेस–माओवादी विच तालमेल भए के हुन्छ ?
म्याग्दीमा कांग्रेस–माओवादी विच तालमेल भए के हुन्छ ?
२०७४, १२ बैशाख मंगलवार १९:५१
म्याग्दीमा तेस्रो शक्तिीको रुपमा रहेको माओवादी जुनसंग तालमेल गर्यो ,त्यही मोर्चालेृ अधिकांस क्षेत्रमा जित्ने सम्भावना देखिन्छ । नेकपा एमालेले नगरपालिका र पाँचवटै गाउँपालिकामा तालमेल गरेपनि बाजी मार्ने दावी गरेपनि ग्रामिण क्षेत्रमा एमालेले सोचेजस्तो अवस्था अहिले छैन् । बेनी नगरपालिकामा साविकको पात्लेखेत र भकिम्ली गाविस गाभिएको छ । जहाँ अन्य राजनीतिक दलको तुलनामा कांग्रेसको चहलपहल देखिन्छ ।
एमालेका नेताहरुले तालमेल गरेपनि कांग्रेस र माओवादीले जित्ने सम्भावना नभएको बताइरहेपनि चुनावी मैदानमा एमालेलाई फलामको चिउरा सावित हुने निश्चित छ । बेनी नगरपालिकाको १० वडामा तालमेल भए एमालेलाई समेत हम्मेहम्मे हुनेछ । तर एमाले र राप्रपाको तालमेलको चर्चा समेत बजारमा सुनिएको छ । राप्रपासंग तालमेल गरे कांग्रेस–माओवादीलाई पनि सजिलो छैन् । बेनी नगरपालिका अन्र्तरगत अर्जम, ज्यारुमककोट, भकिम्लीको मरेक लगाएत अन्य वडामा कमजोर भएपनि राप्रपाको भोटले समेत जीतहारमा भूमिका खेल्ने छ ।
त्यस्तै पाँचवटा गाउँपालिका अन्र्तरगत मंगलामा एमालेलाई कांग्रेस–माओवादीको समिकरणले जित्न निकै मुस्किल हुने बताइन्छ तर पनि माओवादीबाट त्यसक्षेत्रमा प्रभाव राख्ने चन्द्र बहादुर बुढाले उम्मेदवारी दिएका छन् । बुढा अर्मनका भएकाले पनि उनको आसपासका क्षेत्रमा राम्रो मानिन्छ । बावियाचौरमा कांग्रेस र कुहुँमा एमालेको राम्रो प्रभाव छ । तर निर्वाचनको दुईचान दिनमा हुने लेनदेनले समेत मतपरिणामलाई खास प्रभाव पार्ने देखिन्छ । मालिका गाउँपालिका अन्र्तरगत पर्ने दरवाङबाट कांग्रेसका यूवा नेता श्रीप्रसाद रोका मगरले प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका छन् । उनको दरवाङमा राम्रो भएपनि त्यहाँ काग्रेस र एमाले विच प्रतिस्पर्धा छ । निस्कोटमा केही दिन अगाडी जनमुक्ति पार्टीबाट प्रवेश गरेका टंक पुनले कांग्रेसलाई राहत मिलेको छ ।
निस्कोटमा माओवादीको समेत राम्रो छ । एमालेले वडास्तरमा दुवै पार्टीको उपस्थितीमा राप्रपासंग तालमेल गरेपनि जित निकाल्न सहज छैन् । रुममा दोस्रो संविधान सभामा एमालेले आफ्नो पकटमा राखेको थियो तर अहिले एमालेको अवस्था विगतको जस्तो देखिदैन् । कांग्रेसको लगातार उपस्थिति, माओवादीको दलित क्षेत्रमा प्रभावले एमालेलाई दुवै पार्टीले कडा टक्कर दिनेछन् । तर पनि एमालेले दुवै वडामा जित्ने दावी गरेको छ । रुम संग जोडिएको ओखरबोटमा गाउँपालिकाका अन्य वडाको तुलनामा माओवादी शक्तीशाली छ । गत महिना अगाडी ओखरबोटका समाजसेवी दिलिप शेरचनले १ सय ५० जनालाई लाईन लगाएर माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए ।
यदपी माओवादीका केन्द्रिय नेता अमृत शेरचनको पुख्यौली गाउँ भएकाले र विकास निर्माणमा गाउँलेको एजेण्डामा अन्य पार्टीको तुलनामा माओवादीको चासो र प्रचण्ड सरकारको पालामा समेत केही बजेट भित्रिएकाले पनि माओवादीलाई कांग्रेस एमाले मिलेपनि जित्न हम्मेहम्मे पर्ने वडाको रुपमा चिनिन्छ । मालिका गाउँपालिकाकै देविस्थानमा एमाले र कांग्रेसको प्रभाव छ ।
देविस्थानमा माओवादी तेस्रो शक्ती मानिन्छ । यता विममा एमालेका बलियो अवस्था रहेको छ । धौलागिरि गाउँपालिकाको ताकममा एमाले र माओवादीको बलियो मानिन्छ । केन्द्र विवादमा एमालेका सांसदले असहयोग गरेको गुनासो गरेका ताकमबासीको यसपटक अनुमान गरे अनुसार नतिजा निकाल्न तीनवटै दललाई मुस्किल छ । त्यस्तै मुनामा एमाले र कांग्रेसले आफ्नो दावी गरेको छ । गत महिना गाउँमा मेलाको उद्घाटन गर्न गएका कांग्रेसका सभापति खम्बीर गुर्बजाको उपस्थितीले समेत काँंग्रेसलाई उर्जा थपेको छ । यता लुलाङको दलित बस्तीमा माओवादीको प्रभाव छ ।
लुलाङमा कांग्रेस एमालेले समेत आफ्नो प्रभाव देखाइरहेका छन् । गुर्जामा माओवादी र कांग्रेसको तुलनामा एमाले कमजोर मानिन्छ । मुदीमा एमालेको पकट छ । मल्कवाङमा एमालेको हाराहारीमा कांग्रेस पुगेपनि माओवादीको उपस्थिती कमजोर मानिन्छ । धौलागिरि गाउँपालिकाकै मराङमा एमालेको उपस्थति बलियो भनिएपनि जातीय उम्मेदवारले अन्तिम समयमा मतमा प्रभावित बनाउने देखिन्छ । त्यस्तै रघुंगा गाउँपालिकाको पिप्ले र भगवती, बेगखोलामा बहिस्कारको आन्दोलन छ । केन्द्र विवाद देखिएकाले जनताको माग अनुसारको केन्द्र ल्याउन सकेमा यसपटक विगतको फराकिलो अन्तरको सम्भावना देखिदैन् तर पनि ठुला राजनीतिक दल विच केन्द्रका बारेमा देखिएको फरक मत र अनावश्यक प्रचारबाजीले समस्या देखिएको छ । सोही गाउँपालिकाको दग्नाममा कांग्रेस सबैभन्दा बलियो ।
चिमखोलामा कांग्रेस एमाले विच प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने कुईनेमगलेमा कांग्रेसको प्रभाव देखिदै आएको छ । नेकपा एमालेले यूवा नेता चन्द्रमान छन्त्याललाई वडा अध्यक्षमा उठाएको छ । पाखापानीमा राप्रपा र कांग्रेस विच प्रतिस्पर्धा हुने छ । माओवादी सर्मथित शिक्षक संगठनबाट पाखापानीका यू कुमा गुर्बजा कांग्रेसमा प्रवेश र संगठनको चहलपहलले राप्रपाका नेता भिमप्रसाद र जगत गौचनको पकट कायम राख्ने सक्ने सम्भावनालाई चुनौती दिएको छ । त्यस्तै झिँमा एमालेको प्रभाव देखिएपनि यसपटक कांग्रेसले प्राथमिकता दिइ लगातार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । महेन्द्र मावि झिँ का याम बहादुर शेरपुञ्जा कांग्रेसमा प्रवेशले समेत त्यहाँ प्रभाव पार्ने देखिन्छ । उता प्रचु्र सम्भावना भएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा कांग्रेस र एमालेको प्रभाव देखिन्छ । अन्नपुर्णमा माओवादी निर्णायक हो ।
म्याग्दीमा ७१ हजार ४६३ मतदाता
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ७१ हजार ४६३ मतदाता कायम गरेको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले बेनी नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकाको कुल मतदाता ७१ हजार ९१२ आयोगमा स्वीकृतका लागि पठाएपनि अन्तिम मतदाता सुचीमा ४ सय ४९ मतदाता घटेका छन् । कुल मतदाता मध्ये बेनी नगरपालिकामा १८ हजार ३४५, मंगला गाउँपालिकामा ११ हजार ५८, मालिका गाउँपालिका १० हजार ६४४, धौलागिरि गाउँपालिका ९ हजार ३३४, रघुगंगा गाउँपालिका ११ हजार ५६३ र अन्नपुर्ण गाउँपालिकामा १ जना तेस्रो लिङ्ग सहित १० हजार ५१९ मतदाता रहेका छन् । निर्वाचनको मिति नजिकदैं जाँदा निर्वाचनको तयारी समेत तिब्र गतिमा अगाडी बढेको छ । निर्वाचन कार्यालयका अनुसार जिल्लाभर ७२ मतदानस्थल र १०२ केन्द्र कायम गरिएको छ । वडास्तरमा रहेको जनसंख्याको आधारमा केन्द्र तोकिएको कार्यालयले जनाएको छ । ०७० सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा जिल्लामा कुल मतदाता ५६ हजार ५५३ रहेको थियो ।
Previous articleम्याग्दीमा हुन्छ त कांग्रेस–माओवादी तालमेल ?
Next articleम्याग्देलीको लगानीमा बन्ने भयो २५ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना